Kedu ihe bụ mgbanwe ihu igwe? | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ihe bụ mgbanwe ihu igwe?
N'ezie, ị nụla ọtụtụ oge na nso nso a banyere mgbanwe ihu igwe na nsonaazụ ọ nwere ike ịpụta na ọkara na ogologo oge. Ma, You maara n'ezie ihe okwu ahụ n'onwe ya pụtara na ọ bụrụ na ọ dị oke njọ dị ka ha na-ekwu?
Nke bụ eziokwu bụ na mgbanwe ihu igwe na-eme mgbe niile, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe ọ bụla karịa mgbanwe oge nke ihu igwe n'ihi oke oke Okpomoku nke uwa dum. N'okpuru ọnọdụ eke ọ bụ usoro nkịtị, nke na-ahụkarị ụwa, mana ụmụ mmadụ n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya emeela ka njọ site na ihe a na-akpọ mmetụta griin haus. Ka ọ were, Kedu ihe bụ mgbanwe ihu igwe?
1 Kedu ihe bụ mgbanwe ihu igwe?
1.1 Isi ihe kpatara ya
2 Ebumpụta ụwa
3 Anthropogenic kpatara
4 Ihe si na mgbanwe ihu igwe dị ugbu a
4.1 Mmetụta dị ndụ
4.2 Ihe si na ya pụta n'ụwa
Kemgbe. Meteorology bụ nyocha sara mbara ma sie ike ihu igwe agatụbeghị mgbe niile, na nke a bụ ihe anyị onwe anyị nwere ike ịmara na ngabiga oge, na ọbụna ụbọchị. Enwere ọtụtụ ihe metụtara ya: ịdị elu, ebe dị anya site na ikuku ụwa, oke osimiri, na ndị ọzọ. Mgbe anyị na-ekwu maka 'mgbanwe ihu igwe' anyị na-ezo aka na mgbanwe dị ogologo oge zuru ụwa ọnụ na ihu igwe ụwa. Ejiri okwu a na 1988 site n'aka otu ndị ọkà mmụta sayensị bụ ndị kwubiri na ihe na-emepụta carbon na-eme ka mgbanwe ihu igwe dị ngwa.
Ndi okacha amara ndia weputara otutu okwu nke otutu ndi isi ochichi ga-emerịrị ọ bụrụ na ha achọghị ka mbibi ndị ahụ gaa n'ihu.
Ihe kpatara mgbanwe ihu igwe nwere ike ịbụ eke o anthropogenic, nke ahụ bụ ịsị, site n’omume mmadụ.
Otu n'ime ihe ndị sitere n'okike na-eme ka anyị chọta ihe ndị a:
Ọdịiche nke anyanwụ
Meteorite ma ọ bụ asteroid metụtara
Ọrụ ọkụ ọkụ
Ha niile akpatawo mgbanwe ihu igwe oge ụfọdụ. Ọmụmaatụ, Nde afọ 65 gara aga otu kpakpando kụrụ ụwa wee mebie ihe Ice Age, na-ehichapụ dinosaurs ole na ole fọdụrụ ndụ mgbe ọdachi ahụ gasịrị. N'oge ndị na-adịbeghị anya, a na-anakwere echiche ahụ nke na 12.800 afọ gara aga meteorite nke metụrụ Mexico ihe kpatara otu ihe ahụ.
Ọ gaghị ekwe omume ikwu okwu na mmadụ nwere ike ime ka mgbanwe ihu igwe ka njọ el Ndị ọzọ ga-ebido igbusi oke ohia iji mee ka ha ghọọ ala ubi. Ọ bụ eziokwu na n’oge ahụ (ihe dịka puku afọ iri gara aga) agbụrụ mmadụ gafere nde ise, na agbanyeghị na ọ bụ ọnụọgụ dị mkpa, mmetụ dị n’elu ụwa pere mpe karịa taa.
Ugbu a anyị na-achọ iru nde mmadụ asaa. Ihe anyị na-eme na mbara ụwa ebidola ịkpa ike, ebe ọ bụ na kemgbe mgbanwe mgbanwe ọrụ, anyị abawanye ikuku nke gas dị ka carbon dioxide ma ọ bụ methane, nke na-eme ka njọ griin haus. Ma, gịnị ka ọ mejupụtara?
Mgbe a na-ekwu maka usoro a, e zoo aka na ijide okpomọkụ site na anyanwụ na mbara igwe site na oyi akwa gas (dika CO2, methane, ma obu nitrous oxide) achotara na ya. Ọ dị mkpa ịmara na ewezuga mmetụta a enweghị ike ịdị ndụ dịka anyị si mara ya, maka na ụwa ga-ajụkwa oyi. Nature bu ihe nlele nke anwuru anwuru, ma anyi emeela ka o siere ha ike: anyị emeela anwuru site na 30% kemgbe narị afọ gara aga.
Taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkà mmụta sayensị niile kwenyere na ụdị ike anyị na oriri anyị na-agbanwe ihu igwe, nke ga-ewetakwa mmetụta dị oke njọ n'ụwa na, ya mere, n'ụzọ ndụ anyị.
Dabere na akụkọ kachasị ọhụrụ sitere n'aka ndị ọchịchị gọọmentị na-ahụ maka mgbanwe ihu igwe (IPCC), na-amalite mmetụta nke ihe ọjọọ nke mgbanwe ihu igwe na ụwa. Okpomọkụ gbagoro 0,6ºC na narị afọ nke 10, na oke osimiri ejiriwo 12 ruo 0.4 centimeters gbagoo. Amụma ahụ adịghị ekwe nkwa ọ bụla: a na-atụ anya okpomọkụ n'etiti 4 ruo 25 ogo ka elu na narị afọ 82st niile na ịrị elu nke oke osimiri n'etiti XNUMX na XNUMX centimeters.
Ihe si na mgbanwe ihu igwe dị ugbu a
Anyị maara na ọnọdụ okpomọkụ ga-ebili, mana Kedu ihe anyị ga-eche ihu? Inwe ihu igwe dị mma karị nwere ike ịbụụrụ ọtụtụ mmadụ ozi ọma, mana nke bụ eziokwu bụ na anyị kwesịrị ịkwadebe onwe anyị maka nsonaazụ nwere ike ịgbanwe ụwa anyị ruo mgbe ebighị ebi.
Mmetụta dị ndụ
Ọnwụ, ọrịa, nfụkasị, erighị ihe na-edozi ahụ,… na nkenke, ihe niile anyị achọghị ka ha ga-abawanye n’ihi nnukwu okpomọkụ. Na mgbakwunye, ọrịa ọhụrụ ga-apụta, na ndị na-etinyekarị na mpaghara ebe okpomọkụ, ga-aga n'ihu na etiti obodo.
A ga-emetụtakwa osisi na anụmanụ: mmemme mmiri dị ka ifuru ma ọ bụ ịgha akwa ga-abịa n'isi ụtụtụ. Speciesfọdụ ụdị ga-akwụsị ịkwaga mba ọzọ, a ga-amanye ndị ọzọ ka ha mee ya ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịdị ndụ.
Ihe si na ya pụta n'ụwa
Site na ịba ụba ikuku CO2, oke osimiri ga-amakwu gas karịa ga-acidify. N'ihi ya, ọtụtụ anụmanụ, dị ka coral ma ọ bụ mọsel, ga-ala n'iyi. N'ebe dị elu, ụda algae na plankton ga-agbanwe.
Agwaetiti ndị dị ala na ụsọ oké osimiri ga-emikpu n'ihi ịrị elu nke oke osimiri; na n'ọtụtụ ebe idei mmiri ga-abụ otu n'ime nsogbu ndị kachasị eche ha ihu.
N'aka nke ọzọ, oké ọkọchị ga-akawanye njọ n'ógbè ndị ahụ mmiri ozuzo dị ụkọ n'onwe ya.
Dịka ị hụworo, mgbanwe ihu igwe bụ ihe dị oke njọ ma na onye ọ bụla kwesịrị ịmara, ọkachasị ndị isi nke nnukwu ike ụwa. N'ime oge okwu, mbara ala nwere ike ịta ahụhụ ọtụtụ nsonaazụ na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Kedu ihe bụ mgbanwe ihu igwe?
AHA M SITE NA MNA NNA NA MMA MAKA OTING ANY CAN GA-EMEZU CLB CLR CL Ihu Igwe
Zaghachi Alejandra Valois Almazan
Mgbanwe ihu igwe dị na mgbe niile. Ka ọ dị ugbu a, ụmụ mmadụ na-eme ọtụtụ ihe iji mee ya ngwa ngwa ma mee ka ọ ka njọ.
Enwere ọtụtụ ihe enwere ike ịme iji zere ọdachi:
-Care ma chebe gburugburu ebe obibi
-Iji mmiri na ihe ndi ekere eke anyi nwere
-Rụgharịa mgbe ọ bụla anyị nwere ike, ma ọ bụ megharịa
- Zụta ngwaahịa sitere na mpaghara anyị (kwa ụbọchị nnukwu ụlọ ahịa na-ejupụta na ngwaahịa ndị si mba ndị ọzọ weta; ya bụ, ha abatala n'ụgbọ mmiri na / ma ọ bụ ụgbọ elu, nke na-ewepụta gas na-emetọ ikuku)
Achọpụtara m na isiokwu a bara ezigbo uru mana ị nwere ike ịkọwa ihe bụ isi mmalite nke ozi gị? Anaghị m enwe obi abụọ banyere ihe ị na-ekwu (n'eziokwu, m na-ekerịta ya) mana, na ụwa nke sayensị, ọ ka mma ịnwe nkwado site na akwụkwọ sayensị. N'ụzọ dị otú a, ị na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ịchọpụta banyere ndị maara n'ezie (ndị sayensị) na ọ bụghị naanị ịnọrọ na ihe ha nụrụ ma ọ bụ gụọ (nke, ọtụtụ oge, nwere ike ịbụ echiche na-enweghị isi).
Zaghachi MJ Norambuena
Mangroves, nchebe sitere n'oké ifufe
Humboldt dị ugbu a